【Ukukhushulwa kwe-SEO Kyiv 】 PROSEO
Izinsizakalo zokuphromotha iwebhusayithi
Ukuthuthukisa injini yokusesha
Ukukhuthazwa kwewebhusayithi e-Ukraine
Ukudala amasayithi e-Sumy
Ukubhuloga kwesivakashi kusayithi
Isicelo sokukhushulwa kwesayithi
Ukukhushulwa okuphelele ku-inthanethi
Ukuthuthukiswa kwezingosi ze-WEB
Indawo yekhadi lebhizinisi
Ukukhuthazwa kwe-SEO Kyivadmin2022-06-09T15:34:24+00:00
Ukukhuthazwa okusobala nokulawulwayo ku-PROSEO
Njalo ngenyanga sigunyaza uhlelo lokusebenza, isabelomali, ukwenza umsebenzi ngokohlelo. Sihlinzeka ngombiko nohlelo lwenyanga ezayo. Ulawula wonke umsebenzi futhi uyazi ngakho konke okwenzeka kusayithi.
I-SEO - ukwenza ngcono iwebhusayithi
Ukulungiselelwa kwezinjini zokusesha ukuze kwandiswe ithrafikhi. Ukuphromotha i-Google kuzokuvumela ukuthi uqale ukuheha ithrafikhi futhi uyiguqule kusukela kumakhasimende phakathi nezinyanga ezingu-2-6. Ngokungafani neminye imithombo yethrafikhi, ishibhile ukusetshenziswa isikhathi eside.
Ukukhangisa kokuqukethwe, Ukuthenga ku-Google, ukumaketha kabusha
Ukukhangisa okukhokhelwayo ku-Google kuzokuvumela ukuthi uthole ukuvakashelwa kwesayithi ngokushesha. Ngemva kokumisa iziteshi zokukhangisa ezikhokhelwayo, izivakashi ezinentshisekelo kumikhiqizo yakho zizovakashela isayithi evikini lokuqala. Kunefomethi ekhethekile yezitolo ze-inthanethi - Ukuthenga ku-Google, ngendlela yezithombe zemikhiqizo enamanani kusesho lwe-Google. Ngokumaketha kabusha, ungakwazi ukukhumbuza izivakashi ezishiye isayithi ngesithembiso sokuthenga umkhiqizo ezingawuthenganga.
Ukuphromotha kulawulwa abahlaziyi
Ukulungiswa kwe-KP kuzoqala ngokuhlaziywa
Abahlaziyi bazofunda isifundo sakho kanye nezimbangi zakho ngokuningiliziwe. Yiziphi izikhiye zezinhlelo zokusebenza? Aphi amaphuzu akho okukhula?
Izinombolo ziyisisekelo sesu lokuphromotha
Nangaphambi kokuba inkontileka isayinwe, uzothola izibikezelo kanye nohlelo lokusebenza lweqembu elisebenzayo.
Izicelo zomsebenzi kuphela
Angeke abe khona amagama angukhiye angasebenzi. Imibuzo ekulethela ama-oda kuphela ebaluleke kakhulu.
Ukwenza kube ngokoqobo kwe-semantic core
Buyekeza njalo umongo we-semantic, engeza imibuzo emisha, susa okungabalulekile.
Ukuhlaziywa kwethrafikhi okuphelele
Setha amasistimu ezibalo alandelela zonke izinyathelo zomsebenzisi kusayithi.
Sigxila kumphumela olungile
Kunoma yisiphi isikimu sokukhokha sokunyuswa kwesayithi - kuthrafikhi, izikhundla noma imikhondo, sibheka ukuguquguquka kwezicelo kanye nezingcingo ezivela kusayithi.
Yini efakiwe ezindlekweni zokunyuswa kwe-SEO?
Ukwenza i-SEO-audit enemininingwane: ukucwaninga kwezobuchwepheshe, ukuhweba, ukubheka ukwakheka kanye nokwenza kahle kokuqukethwe. Ukuhlaziywa okujulile kwezihloko nezimbangi. Ukulungiswa kwezincomo ngesakhiwo sesayithi. Ukusebenza ngezici zokuziphatha. Ukubhala imisebenzi yezobuchwepheshe yomkopishi. Ilawula ukwethulwa kwezincomo zobuchwepheshe. Ukusebenza ngezinto zesixhumanisi: ukubeka izixhumanisi ezintsha, ukulungisa isu lesixhumanisi. Ukucaciswa okuningiliziwe kwamakhasi akhuthazwayo - amaphuzu ezincomo zokuthuthukiswa.
Umsebenzi womphathi we-akhawunti
Ukuhlaziywa komphumela ngokulungiswa okungenzeka kwesu. Ukuxhumana ngomlomo nokubhaliwe neklayenti kuyo yonke iphrojekthi ngokuvumelana nezincomo, okuqukethwe, umsebenzi owenziwe; ingxoxo yemiphumela ephakathi. Igcina imibhalo (izinkontileka, izivumelwano ezengeziwe, imibiko, imibhalo yokuvala ama-akhawunti). Ukubonisana ngezinkonzo ezengeziwe zenkampani.
Ukwenza izinguquko kukhodi ye-html ngokuya ngomsebenzi wezobuchwepheshe kusuka kusilungiseleli. Inombolo yamahora kanjiniyela ngenyanga inqunywa imigomo yenkontileka. Sisebenza nazo zonke izinhlelo ezivamile zokuphatha isayithi: i-WordPress, i-OpenCart, i-Joomla, i-Drupal nezinye.
Umsebenzi womkopishi we-SEO
Ukubhala imibhalo yomsebenzi wobuchwepheshe wesilungiseleli. Sibhala imibhalo yawo womabili amakhasi okukhangisa kanye namakhasi engeziwe, uma kudingwa yizicaciso ze-optimizer. Ukubhalwa kokuqukethwe, okusekelwe ezifisweni zekhasimende, kuxoxwa ngazodwana.
Ukwenza izinguquko: izihloko, imibhalo nokuqukethwe okuyingcaca ngokuhambisana nomsebenzi wobuchwepheshe wesilungiseleli. Ukwenza izinguquko ezifanekisweni zekhasi - amakhodi wokubala, imakhaphu yokuqukethwe nokufometha, njll. Ukuhlela okuncane kwekhodi ye-html, ngaphandle uma kudinga ukucwiliswa okujulile kuma-algorithms we-CMS. Ukwenza izinguquko, ngokwezifiso zekhasimende, kuxoxwa ngazodwana.
Ukulungiswa komsebenzi wezobuchwepheshe wokufakwa kwamakhodi wokubala, i-GTM. Ukulungiswa kwezimoto zokubeka imigomo yokulandelela izenzo zabasebenzisi (ukusetshenziswa kwamafomu nezinsizakalo emakhasini, ukubala inani lezicelo ezigcwalisiwe, njll.). Ifinyeza imiphumela yokunyuswa kwesayithi ngokuya ngokuguqulwa. Izincomo zokulungiswa kwe-semantic core. Ukukhethwa kwemibuzo yokuguqulwa ukuze kuthuthukiswe izinyuso zabo, izincomo zokulungisa umongo we-semantic. Izincomo zokusebenziseka - ngokusekelwe emigomeni yenkontileka noma izivumelwano ezengeziwe.
Ukuthuthukiswa kwe-SEO kwesayithi ku-TOP 3
Sisebenza ngethrafikhi nezikhundla. Khulisa ithrafikhi nokuguqulwa. Izibalo nemibiko izokunikeza umbono waso sonke isithombe esihambisana nebhizinisi lakho.
Ngenxa yokukhuthazwa kweziteshi eziningi, ukuthuthukiswa kokusebenziseka, ukusheshisa isayithi, isayithi lizosebenza, kodwa ngomthamo ogcwele - ukuthuthukisa ithrafikhi nokuguqulwa.
Sebenza ngezibalo zesayithi
Asisebenzi kuphela ngezinhlelo ezijwayelekile zokuhlaziya, isethi yethu yamathuluzi ihlanganisa amathuluzi okudala i-Big Data Analytics yokuhlukanisa izethameli zamaphothali amakhulu.
Singozakwethu abasemthethweni be-Google</h3 >
Ukujwayela isivinini seselula nesayithi
U-60% wethrafikhi ubalwa ngamadivayisi eselula, ukwenziwa ngcono kwesakhiwo kukuvumela ukuthi uthole ithrafikhi eyengeziwe ezinjinini zokusesha. Futhi ku ngokwesilinganiso, ulahlekelwa kufika ku-30% wamakhasimende angalindi ukuthi ikhasi lilayishwe.
Ibhrendi nomsebenzi wezenhlalakahle izimpawu
U-100% wabasebenzi bethu bangabalandeli bomsebenzi wabo.
I-ROI emaphakathi yamaphrojekthi
Izikhundla ku-TOP 10
Sisebenzisa izindlela zokuphromotha ezimhlophe, sisebenzisa kuphela izixhumanisi "zaphakade".
"Iqhinga" lethu ukusebenza ngamaphoyinti okukhula esayithi
Yiba PHEZULU futhi uthole ithrafikhi eyengeziwe eya kusayithi lakho ukuze uthole imali eyanele.
Sinikeza kuphela umsebenzi obalulekile. Sikhuthaza amasayithi ngokuthola "amaphuzu okukhula". Ngenxa yalokho - intuthuko esheshayo ngesikhathi esincane.
Izindleko zokuphromotha isayithi le-SEO
Kusuka 500$ kusukela ezinyangeni ezi-3
Izindleko zokwenziwa kahle kwesayithi zincike enanini lemisebenzi esizeni, isimo sensiza, uhlobo lwesayithi, isihloko, kanye nomlando wokunyuswa kwesayithi.
Ukuhlolwa kwe-SEO kwesayithi
Ukwakha inqwaba yezixhumanisi
Ukuphathwa kwesithunzi senkampani
Kusuka200$kusukela ezinsukwini ezingu-10
Izindleko zokukhangisa kokuqukethwe zincike ezinhlotsheni zamathuluzi axhunyiwe: sesha ukukhangisa kokuqukethwe, ukumaketha kabusha, isikhungo somthengisi. Kanye nenani lomsebenzi owenziwayo.
Izilungiselelo ze-Akhawunti ye-Google
Ukukhethwa kwemibuzo yosesho yokuvama
Izibalo ezixhumanisayo nezibalo
Ukwenza kahle i-akhawunti ngokuya nge-algorithm yethu eyingqayizivele
“Njalo ngenyanga ngithola umbiko ngomsebenzi owenziwe kanye nomphumela. Ngizoqaphela ukutholakala kosizo lobuchwepheshe neziqinisekiso zomsebenzi owenziwe. Yonke imibuzo ihlale iphendulwa ngokushesha ngaphandle kokulibala. ”
“Siyabonga ngezinkonzo ezisezingeni eliphezulu esizihlinzekiwe. Saqala ukufaka isicelo esikhathini esingaphezu konyaka odlule, sisebenza ndawonye manje. Sijabule kakhulu ngemiphumela ye-CEO - indawo yethu yalethwa kubaholi abaphelele ngo-2015. "
Imiphumela yeqe okulindelwe: ukukhula kokuthengisa kwekota yokuqala kwaba + 96%, futhi lokhu "kusenkathini efile", lapho sivame ukulahlekelwa. Sihlela ukuqhubeka nokusebenzisana.”
Kuyini ukukhushulwa kwe-SEO? ( injini yokusesha nokwenza kahle) - iqoqo lemisebenzi ezingxenyeni zangaphakathi nezangaphandle zokuthuthukisa ukuphakamisa isikhundla sesayithi emiphumeleni yezinjini zokusesha zemibuzo ethile. Ukwandisa abakhona futhi ngenxa yalokho - ukwandisa ukuthengisa.
Ihlanganisani Ukukhuthazwa kwesayithi le-SEO. iqukethe izingxenye ezimbili eziyinhloko: ukwenza kahle kwangaphakathi nangaphandle. Ngaphambi kokuqala umsebenzi, ochwepheshe nabo benza ucwaningo, ngokusekelwe emiphumeleni lapho umsebenzi wezobuchwepheshe udwetshwa ukulungisa wonke amaphutha futhi wenze izinguquko ezidingekayo.
Umnqamulajuqu wokuphromotha ku-SEO: Ukuthuthukiswa kwe-SEO okuphelele kwesayithi ku-Google naku-Yandex kuthatha isilinganiso sezinyanga ezi-4-6. Igama lincike esihlokweni, izinga lokuncintisana, ikhwalithi kanye nenani lamagama angukhiye. Nokho, njengoba ulwazi lwethu lubonisile, imiphumela yokuqala ngokuvamile isivele ibonakala enyangeni yesibili. Ezinyangeni ezizayo, inqwaba yesixhumanisi sesayithi izokhula, futhi ukwethenjwa kwesayithi ngezinjini zokusesha kuzokhula.
I-SEO ku-TOP 3,5,10 ku-Google. Ukudala nokukhangisa isayithi ngesikhathi esifushane kakhulu.
Inqubo yokwenza isayithi
Inhloso wukuba PHEZULU izinjini zokusesha zemibuzo yokusesha edingekayo, isb. ekhasini lokuqala le-Google ne-Yandex ngamagama angukhiye. Uzokwazi ukuthola izivakashi eziningi, okuzokwandisa ukuthengisa.
Ochwepheshe abangu-5+ basebenza kuphrojekthi
Khulisa izikhundla, i-CTR, ithrafikhi
Ikhodi ye-adaptha yephromoshini ye-SEO
Ukubhala imibhalo ethengisa
Ukubhala okuqukethwe kwezindaba
Ukwenza ucwaningo olunzulu
Ukuvuselelwa kwesoftware yesayithi
Sebenza ngezibuyekezo ku-inthanethi
Thuthukisa usesho lweselula
Ukuthuthukiswa kokusesha kwendawo
Ngifuna ukukhushulwa okuphelele
Xhumana nathi, sizophendula yonke imibuzo, sizobonisana, sizosiza ngokukhuthazwa kwesayithi lakho.
Funda ibhulogi yethu:
Imakethe - ukuthi iyini ngamagama alula nokuthi isebenza kanjani
Amathegi: lokho abayikho, izinhlobo zamathegi, ukuthi bayini
Uyengeza kanjani inkampani noma isitolo ku-Google Amamephu
Umoya owomile efulethini: izimbangela kanye nengozi empilweni
Ukuthuthukiswa kwe-SEO kwabashintshi be-inthanethi be-electronic kanye ne-cryptocurrency
Kungani ngingakwazi ukubona ukukhangisa kwami ​​​​kokuqukethwe?
Isikhungo Sebhizinisi sase-Ost-West Express
I-Proseo - ukukhula kwethrafikhi nokuguqulwa
Ukukhuthazwa kwewebhusayithi e-Kyiv
Izitikha zesiqandisi - ikesi lokuphromotha